Gestodene အမှုန့် (60282-87-3) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Gestodene အမှုန့် (60282-87-3)
SKU: 60282-87-3. အမျိုးအစား: အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Gestodene မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (60282-87-3) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Gestodene အမှုန့်, အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Logest, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle နှင့် Triadene အဖြစ် others.Gestodene တစ် progestogen ဟော်မုန်းတားဆေးဖြစ်ပါတယ်အများအပြား။ gestoden င်ကုန်ပစ္စည်းများ ethinylestradiol နှင့် gestodene ၏ 20 mcg ၏ 75 mcg ပါရှိသည်ရာ Meliane, ပါဝင်သည်; နှင့် ethinylestradiol နှင့် gestodene ၏ 30 mcg ၏ 75 mcg ပါရှိသည်ရာ Gynera ။
Gestodene အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Gestodene အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 190-192 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်များ: Gestodene အမှုန့်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Logest, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle နှင့် Triadene နှင့်အခြားသူများ
Gestodene အမှုန့်အလွန်အစွမ်းထက် progestogen ဖြစ်တယ်, ထို့အပြင်၎င်း၏ progestogenic လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းအန်ဒရိုဂျင်, antimineralocorticoid နှင့် glucocorticoid activity.Due ပိုင်ဆိုင်ပါက antigonadotropic နှင့် functional antiestrogenic သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Gestodene အမှုန့်များ၏ bioavailability% 87 မှ 100 ဖြစ်ပါတယ်။ Desogestrel ပါနှင့် norgestimate ကဲ့သို့အခြားတတိယမျိုးဆက် progestins မတူဘဲ, Gestodene အမှုန့်တစ် prodrug.Its မျှ half-နာရီ 12 မှ 14 ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ Gestodene အမှုန့် (Femoden) ယူပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သည်:
မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုသောလျှင်ဓတေား၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော Reversible လုပ်နည်းစနစ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Gestodene အမှုန့် (Femodene) ထိုသို့သောလမိုင်ဒီးယသို့မဟုတ် HIV ပိုးအဖြစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု, ဆန့်ကျင်သငျသညျကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သာကွန်ဒုံးဒီလိုလုပ်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျအဖြစ် Gestodene အမှုန့်နှင့် ethinylestradiol ယူပါ။ ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။
အဆိုပါ Gestodene အမှုန့်နှင့် Ethinylestradiol သင့်ဆရာဝန်အကြံပြုထိုးအောက်ပါ (မည်သည့်သို့မဟုတ်လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကိုသုံးပါ) ပေါ်တွင်အခြေခံလိမ့်မည်:
Gestodene အမှုန့်နှင့် Ethinylestradiol အောက်ပါဆေးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်:
Desogestrel ပါ-ethinyl Estradiol 0.15 Mg-0.03 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Desogestrel ပါ-ethinyl Estradiol Biphasic ခံတွင်း Tablet ကို
Desogestrel ပါ-ethinyl Estradiol Triphasic ခံတွင်း Tablet ကို
Drospirenone-ethinyl Estradiol3Mg-0.02 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Drospirenone-ethinyl Estradiol3Mg-0.03 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Drospirenone / ethinyl Estradiol / levomefolate Biphasic3Mg-0.02 Mg-0.451 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Drospirenone / ethinyl Estradiol / levomefolate Biphasic3Mg-0.03 Mg-0.451 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol 0.02 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol 0.05 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol 0.5 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol ဒြပ်ပေါင်းများ Powder
Ethinyl Estradiol-ethynodiol 35 mcg-1 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-ethynodiol 50 mcg-1 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-etonogestrel 0.015 Mg-0.120 Mg အင်္ဂါဇာတ် Ring ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel 0.05 Mg-0.25 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel 20 mcg-100 mcg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel 20 mcg-90 mcg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel 30 mcg-0.15 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Biphasic တိုးချဲ့ Cycle ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel တိုးချဲ့ Cycle 30 mcg-0.15 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel အနိမျ့ဆေးသောက်ရန် Biphasic တိုးချဲ့ Cycle ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Quadriphasic တိုးချဲ့ Cycle ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Triphasic ခံတွင်း Tablet ကို
Ethinyl Estradiol-norelgestromin 20 mcg-150 mcg / 24 နာရီ Transdermal ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, တိုးချဲ့ဖြန့်ချိ
Ethinyl Estradiol-norgestrel 50 mcg-0.5 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
ဘယ်လို Gestodene အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Femodene တက်ဘလက်လေ့က 'ဆေးလုံး' သို့မဟုတ်တားဆေးအဖြစ်လူသိများဟော်မုန်းဓတေားအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Femodene တက်ဘလက်နှစ်ခုတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ, ethinylestradiol နှင့် Gestodene အမှုန့်ဆံ့။ ဤသဘာဝဖြစ်ပေါ်အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်း, အီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်း၏ဒြပ်ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်။ Ethinylestradiol အီစရိုဂျင်၏ဓာတုဗားရှင်းဖြစ်ပြီး Gestodene အမှုန့်အဓိကချို့ယွင်းတဲ့ '' တတိယမျိုးဆက် '' ဒြပ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။
Femodene တူသောပေါင်းလိုက်သောပါးစပ် contraceptives Over-စီးနင်းပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းထဲမှာ, လိင်ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ချင်းစီတစ်လတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းပေးပါ။ အဆိုပါဟော်မုန်းတစ်ခုကြက်ဥဟာသားဥအိမ် (မျိုးဥထွက်) မှဖြန့်ချိပြီးဖြစ်နိုင်သမျှကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဘို့အမိဝမ်း၏နံရံများကို ပြင်ဆင်. ခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသံသရာ၏အဆုံးမှာကြက်ဥဟာဟော်မုန်းများအဆင့်ဆင့်မျိုးအောင်ရသေးလျှင်အမိဝမ်းနံရံတစ်ဦးသည်လစဉ်ကာလအဖြစ်သွန်းလောင်းခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေလဲကွပါ၏။
အဓိကအားဖြင့်မျိုးဥထွက်ပြီးသားဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တွေးသို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြားခြင်းအားဖြင့်ဆေးလုံးအလုပ်အတွက်ယူဟော်မုန်းများ၏နေ့စဉ်ထိုး။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီလ ripening နှင့်သားဥအိမ်ကနေဖြန့်ချိလျက်ရှိရာမှတစ်ဦးကြက်ဥကာကွယ်ပေးသည်။
အဆိုပါဟော်မုန်းကိုလည်းပိုပြီးခက်ခဲသုက်ပိုးအမိဝမ်းထဲသို့လိင်အင်္ဂါကနေဖြတ်ကူးခြင်းနှင့်ကြက်ဥရောက်ရှိဖို့စေသည်သောအမိဝမ်း၏လည်ပင်းမှာသဘာဝအချွဲ၏အထူတိုးမြှင့်။ သူတို့ကအစကလျော့နည်းဖွယ်ရှိတဲ့ဓာတ်မြေသြဇာကြက်ဥအဲဒီမှာသှငျးနိုငျကွောငျးအောင်, အမိဝမ်းနံရံ (endometrium) ၏အရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲသွား။
Ethinyl Estradiol / Gestodene အမှုန့်အမျိုးအစား X သို့ကျရောက်:
ဒါဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Ethinyl Estradiol / Gestodene အမှုန့်ကိုယူပြီးအမျိုးသမီးတွေပြဿနာများနှင့်အတူကလေးရှိစေခြင်းငှါပြသလျက်ရှိသည်။ မိခင်များအတွက်ဆေးဝါး၏အကျိုးကျေးဇူးများကလေးမှဘေးအန္တရာယ်များထင်ရှားသောဘယ်မှာမျှအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ဤရွေ့ကားဆေးဝါးများကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောခြင်းကိုဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ခန္ဓာကိုယ် wt အပြောင်းအလဲစိတ်ဓာတ် / ပြောင်းလဲစိတ်ခံစားမှု, ရင်သားနာကျင်မှုသို့မဟုတ်နူးညံ့ကြင်နာမှု, လိင်စိတ်ပြောင်းလဲမှုများ။ ထိုကဲ့သို့သောပျို့နှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုအဖြစ် GI နှောင့်အယှက်။
AASraw ထံမှ Gestodene အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ရောင်းရန် Gestodene အမှုန့်: Gestodene အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန် 10 အမှုအရာ